Faransiisku wuxuu dejiyaa duulimaadyada daad -gureynta Kabul ilaa Paris isagoo sii maraya Abu Dhabi
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » France Breaking News » Faransiisku wuxuu dejiyaa duulimaadyada daad -gureynta Kabul ilaa Paris isagoo sii maraya Abu Dhabi
Wararka Afgaanistaan • Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Safarka • Crime • France Breaking News • Wararka Dowladda • News • Dadka • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Imaaraadka Carabta • Wararka kala duwan
Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Faransiiska ee Arrimaha Yurub, Clement Beaune
Dhowr sano ka hor, Faransiiska ayaa kaalinta kowaad ka galay Yurub oo dhan marka la eego magangalyo siinta dadka Afgaanistaan ​​ee ku nool dhulkeeda.
Faransiiska ayaa sameeyay buundada hawada si dadka looga soo daadgureeyo Afghanistan.
Duulimaadkii daadgureynta Faransiiska ayaa ka duuli doona Kabul kuna sii jeedda Paris isagoo u sii maraya Abu Dhabi.
Faransiiska si ay 'kumanaan' uga daadgureeyaan Afghanistan.
Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Faransiiska ee Arrimaha Yurub, Clement Beaune ayaa maanta sheegay in Faransiisku samaynayo buundada hawada si looga daadgureeyo 'kumanaan' dad ah Kabul, Afgaanistaan ​​oo la geeyo Paris.
“Hadda, si loo bixiyo daadgureyn, Faransiisku wuxuu abuurayaa buundada hawada ee u dhexeysa Kabul iyo Paris leh diyaarado ku duuli doona Abu Dhabi, ”ayuu yiri Beaune.
“Waqtigan xaadirka ah, ma hayno tiro sax ah inta qof ee laga rari doono Afghanistan Faransiiska. Si kastaba xaalku ha ahaadee, waxaa cad inaan ka hadlayno dhowr kun oo qof oo u baahan badbaadin, ”ayuu raaciyay.
Xoghayaha arrimaha dibedda ayaa sheegay in Faransiisku “billaabay daadgureynta dadka reer Afgaanistaan ​​bishii May si loo badbaadiyo 600 oo qof oo u shaqeynayay.”
“Ilaa hadda, saddex diyaaradood oo milateri oo Faransiis ah ayaa durba daad -gureeyay qiyaastii 400 oo qof. Kuwani waxay u badan yihiin reer Afgaanistaan ​​oo u baahan badbaadin degdeg ah. Guud ahaan, inta badan dadka reer Afgaanistaan ​​waxay u shaqaynayeen hay'ado kala duwan oo Faransiis ah, ”ayuu yidhi.
Sida laga soo xigtay Beaun, Faransiisku "wuxuu ula dhaqmayaa soo dhaweynta reer Afgaanistaan ​​dhulkeeda mas'uuliyad buuxda." “Sanadihii la soo dhaafay, waxaan siinnay iftiinka cagaaran 10,000 codsi oo magangalyo uga yimid Afgaanistaan. Dhowr sano oo horeba, Faransiisku wuxuu ahaa kan ugu horreeya Yurub oo dhan marka la eego magangalyada la siinayo dadka reer Afgaanistaan ​​ee ku sugan dhulkeeda, ”ayuu sarkaalku raaciyay.
“Waan sii wadaynaa dhaqankan. Ma jiraan xannibaadyo tiro leh oo ka jira goobtan. Dhaqanka qaabilaada dadka reer Afgaanistaan ​​ee dhulka Faransiiska ayaa sidoo kale sii socon doona kadib markii buundada hawada ee dalkan ay joogsato, ”ayuu xaqiijiyay xoghayaha arrimaha dibedda.
Oktoobar 20, 2021 at 10: 49